Maxaad Ka Taqaan Raaxada gabadha gadaal u balaaran - iftineducation.com
Maxaad Ka Taqaan Raaxada gabadha gadaal u balaaran
iftineducation.com – Naagta baryaha weyn ayaa ku fiican raaxada noocan ah, marka la istiimiyo kaddib labada bari inta saliid loo mariyo ayay calool calool u seexanaysaa markaas ninka ayaa ku kor seexanayo.
Wuxuu dhex gelinayaa laba qayb barida bahalkiisa, wuu ku dhex dhumayaa, boqana ma gaarsiinayo, gabadha raaxo ayay dareemaysaa, laakin waa inay tahay gabar aad u dabo weyn oo marka ay soconayso ruxanayso futadeeda.
Laakin haddii ay caato tahay waa khatar waxaa dhici karta inuu daloolka dabada galo guska, marka galmada gadaal ayaa dhacayso, taas looma jeedo, raaxada barida waxaa laga wadaa bahalka in lagu riixo jirka naagta keliya.
Dumarka qaar way jecel yihiin waxay la mid tahay agtooda istiinka raaxada ay ka helaan naasaha, waxaa kaloo jirta way adag tahay duleelka gadaal in wax la geliyo waayo aad buu u yaryahay, ragga naagaha dabada ka fuula waxay adeegsadaan kareemo ama saliid iyadoo sidaas ay tahay ayay ku adag tahay inuu bahalka galo.
shuunka iska xiir gabar yahey hadii kale ninka kacsiga ka halawayo